Dog Factory - Mpanamboatra alika China, mpamatsy
Ity alika modely alika GPS ity dia miasa amin'ny toeran'ny alika sy ny fitantanana isan'andro. Mpanampy tsara ho an'ny alika izany. Maharitra 5 andro ny fiandrasana maharitra, mamela fotoana ampy hahitanao ny alikanao, mifototra amin'ny GPS teknolojia marobe + WIFI + LBS izay ahafahana mamantatra marina ny 20m anaty trano sy ivelan'ny varavarana 200m. Ary nametraka fefy elektrika ianao, raha vao mivoaka ny fefy ny alika dia hanaitra izany. Raha te hanome fahalalahana ny alika ianao, dia ilaina ny Tracker GPS mba tsy ho very izy ireo.
Raha misy WIFI ao an-trano dia amboary tsara ny toerana, aza mila ny teny miafina ary ampifandraiso ho azy ny WIFI eo akaiky eo, eo amin'ny toerana misy antsika, ny GPS Amerikana dia miorina tsara toy ny fitetezana finday, raha tsy misy WIFI ao anaty trano dia avadiho ho azy ny fametrahana ny toeran'ny base base, ny biby fiompy dia tsy ho very.
Kilasy rano filomanosana, lena ny orana amin'ny orana ary mitsambikina ao anaty dobo filomanosana miaraka aminao tsy mahatsiaro tena noho ny filalaovana ianao, aza matahotra, tsy hiditra ao anatiny ny rano. Aza manahy fa tapaka ny tracker rehefa milalao ny alika ary manondraka rano na mando amin'ny orana.
Raha mandeha amin'ny alika amin'ny alina ianao dia aza manahy fa tsy ho hitanao ny halaviran'ny alika ao anaty haizina. Aza mitady afa-tsy biby sy haza lambo mitady APP, azonao atao ny mahatsapa hoe aiza ilay alika misy hazavana + feo. Fanamafisam-peo lehibe, ampidiro mpandahateny volon-java-dehibe miisa dimy izay nafarana, ny feonao dia mbola afaka maheno azy tsara amin'ny biby ao anaty tabataba any ivelany. Ny sivilizasiona iray dia tsy mila miantsoantso sy manelingelina ny hafa, afaka mandefa feo amin'ny alàlan'ny antso na APP ianao hiteny ny teny amin'ny biby fiompinao, ny fitaovana dia hilalao ho azy ireo ho an'ny biby.
Fanaraha-maso feo lavitra, rehefa te hahalala ny manodidina ny alika ianao dia mandefasa torolàlana ho an'ny mpanjifa finday, mamelona mangingina ilay famantaranandro manodidina anao ny famataranandro raha tsy misy ny fihetsika.
Ity alika GPS modely alika ity dia ho an'ny toeran'ny alika sy ny fitazonana azy isan'andro. Fijanonana maharitra 5 andro, ary miorina amin'ny GPS teknolojia marobe + WIFI + LBS ahafahana mamantatra marina ny 20m anaty trano sy ny varavarana 200m ivelan'ny trano. Ary azonao atao ny mametraka fefy elektrika, hanaitra ny APP raha vao mivoaka ny fefy ny alika. Raha te hanome fahalalahana ny alika ianao dia tena ilaina ny tracker GPS toy izany mba tsy ho very izy ireo.
Rano matevina, na dia tsy misy olana aza raha milomano ny alika, ka aza manahy ny orana sy ny famafazana rano. Fanamafisam-peo lehibe, ampidiro mpandahateny volon-java-dehibe miisa dimy izay nafarana, ny feonao dia mbola afaka maheno azy tsara amin'ny biby ao anaty tabataba any ivelany. Ny sivilizasiona iray dia tsy mila miantsoantso sy manelingelina ny hafa, afaka mandefa feo amin'ny alàlan'ny antso na APP ianao hiteny ny teny amin'ny biby fiompinao, ny fitaovana dia hilalao ho azy ireo ho an'ny biby.
Ity modely GPS tracker ity dia miasa ho an'ny alika mametraka, ary afaka miasa amin'ny entana sy kitapo hafa. Miorina amin'ny teknolojia misy ny GPS + AGPS izany, afaka mamantatra tsara amin'ny faritra 5-10m, hisorohana ny fahaverezan'ny biby sy ny entana. Izy io dia afaka mametraka Geo-fefy ary hanaitra avy hatrany ny fefy hahafantarana ny fiarovana.
Miaraka amin'ny fahaizan'ny bateria lehibe sy ny maody fitehirizana herinaratra, azo alaina mandritra ny 15 andro fiomanana, fotoana ampy hahitana. Ary fiasa anaty rano izany, tsy misy ahiahy ny biby fiompy milalao rano. Fitaovana manampy amin'ny famoizam-po ny fianakaviana.
Mamboly hazavana, Mitombo ny avotra, Jiro zavamaniry, Mamboly Lightin ny zavamaniry, Mitombo Lightin, Mitombo Ligh,